Gudd. Aqalka Sare oo eedeyn u jeediyey dowlada federaalka iyo maamul goboleedyada… – Hagaag.com
Gudd. Aqalka Sare oo eedeyn u jeediyey dowlada federaalka iyo maamul goboleedyada…
Posted on 28 Oktoobar 2018 by Admin in National // 0 Comments
Guddoomiyaha Golaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi Cabdullahi oo maanta ka hadlay kulanka Golaha aqalka sare ayaa eedeyn u soo jeediyay Dowlada Federalka iyo Maamul goboleedyada waxana uu ugu baaqay inay isu tanasulaan oo eegeen shacabka Soomaaliyeed.
Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo u muuqday in uu quus ka taagan yahay sidii loo xalin lahaa khilaafka sii dheeraanaya ee u dhexeeya dowlada Federalka iyo inta badan maamul goboleedyada ayaa si gaar ah ugaga hadlay warqad ka soo baxday xafiiska Madaxweyne Farmaajo taasoo markale ku socotay Dowlad Goboleedyada.
Gudoomiyaha aqalka sare ayaa ku tilmaamay warqadaas inuusan madaxweynaha, islamarkaana ay qortay gacan seddexaad oo uusan magacaabin.
Sidoo kale Gudoomiye Cabdi Xaashi ayaa sheegay in Madaxda Dowlada dhexe iyo kuwa Maamul Gobaleedyada aysan raali ka aheyn in la dhex-dhexaadiyo Muranka ka dhex taagan.
Guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi ayaa waxaa uu eedeyn u jeediyay madaxweynaha Maamulka jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed madoobe, isagoona Sheegay in Axmed Madoobe dhankiisa ay wax ka socon la’yihiin.
Warkan ka soo baxay guddoomiyaha Aqalka Sare ayaa ku soo beegmay xilli uu maanta la kulmay wakiilada Qaramada Midoobay iyo Midowga Afrika ee dalka Soomaaliya isagoo kala hadlay inay ka qeybqaataan xallinta khilaafka u dhexeeya dowlada Federalka iyo Dowlad Goboleedyada.